जेरक्स 3250 - को महत निर्माता देखि एक ठोस मुद्रक
पहिलो र मुख्य जेरक्स 3250 कामदारहरूको कम्प्युटर मध्यम र ठूलो समूह भित्र एक मुद्रण सहायक प्रणाली सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जहाँ तपाईं मुद्रण उत्पादन शक्ति unleash सक्नुहुन्छ अर्को क्षेत्र - केन्द्र नक्कल छ। यो समीक्षा र गति विशेषताहरु एक लेजर प्रिन्टर थप छलफल गरिनेछ।
को जेरक्स 3250 मुख्यतया छ दावा पृष्ठ को ठोस मासिक मात्रा मुद्रित गर्न, 50000. बराबर यो पक्कै पनि एक ठूलो कार्यसमूह भित्र पूर्ण-fledged कागजात व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्न पर्याप्त छ हुन सक्छ जो अधिकतम राशि। पनि मूल्य स्थिति यसलाई 50 भन्दा बढी कम्प्युटर प्रणाली एकाइहरूको संख्या संग काम समूहका बीचमा यस्तो समाधान प्रयोग गर्न जायज छ।
जहाँ यो लेखको नायक यसको आवेदन पाउन सक्छ अर्को ठाउँ - केन्द्र प्रतिलिपि। स्रोतहरू आफ्नो मुद्रण यस्तो संगठनको monochromatic मुद्रण मा आवश्यकता ढाक्न पर्याप्त छ। अन्य सबै अवस्थामा, एक लेजर प्रिन्टर यस्तो प्राविधिक कारण र दृश्य को एक आर्थिक बिन्दुबाट दुवै सम्पूर्ण मुनासिप होइन को प्रयोग।
यो प्रविधि, प्रदर्शन, इन्टरफेस, कारतूस
रूपमा पहिले उल्लेख जेरक्स 3250, लेजर आधारित छ मुद्रण प्रविधि। यसको मुख्य फाइदा पृष्ठ उत्पादन (एकल-पक्षियमुद्रण मा 28 A4 प्रति मिनेट पृष्ठ र डबल पक्षीय को 14 पानाहरू) र एक महिना को लागि मुद्रित पृष्ठ को एक धेरै ठूलो रकम (अप 50000 पृष्ठहरू) को उच्च दर छ। यस मामला मा कम साथै, एक - तल्लो संकल्प (1200x1200 को), र यस कारण तल्लो गुणस्तर उत्पादन एक जेट मुद्रण प्रविधी संग तुलना तस्बिरहरू।
समीक्षा अन्तर्गत उत्पादन को लाभ, मुद्रण श्रेय गर्न सकिन्छ, र दुई-तार जडान प्रविधिले प्रतिनिधित्व छ जो इन्टरफेस सूची। मुख्य एक - आरजे-45 पोर्ट छ। उहाँले जोडी तपाईं कम्प्युटर नेटवर्क कम्प्युटिङ गर्न मुद्रक जडान गर्न र जसबाट मुद्रण सर्भर यसलाई बारी अनुमति दिन्छ मुड। स्विचन प्रक्रिया यस अवस्थामा युएसबी छ आरक्षित। यसको आवेदन मा मुद्रण समाधान मुद्रक छ, र जो यो सिधै जोडिएको छ पीसी मा लगाएको संगठन सबै प्रश्नहरू छाप्न छ।
को क्यासेट आधारभूत मोडेल, यो मामला मा - 106R01373। यो मूल मुद्रक प्याकेजिङ्ग मा समावेश गरिएको छ। खरीद यो 2,500 पृष्ठ को उत्पादन महसुस गर्न सक्छन्, तर अर्को भर्ने पछि यो संख्या यस मुद्रक मा, 3500. पनि गर्न वृद्धि हुनेछ पछि, तपाईं थप capacious क्यासेट 106R01374, पूर्ण इन्धन संग 5000 पृष्ठ मुद्रण गर्न सक्छन् कि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यस मामला मा छापिएको पृष्ठ अधिकतम आकार 297H210mm छ। कि यो सामान्य छ सबै भन्दा साधारण हाल A4 छ। कागज को लगभग कुनै पनि मानक पानामा आफ्नो जेरक्स 3250 सक्छन् उत्पादन कागजात र तस्बिरहरू बाहेक। यस मामला मा उच्चतम अनुज्ञेय, घनत्व मूल्य 160g / m2छ। त्यो मानिन्छ एक लेजर प्रिन्टर, उदाहरणका लागि मुद्रण गर्न सक्छन्, Whatman कागज मा। को सानो मूल्य कागज घनत्व, 60g / m2- जो यन्त्रमा प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
समीक्षा र वास्तविक लागत
यस मामला मा मात्र drawback - जेरक्स 3250. समीक्षा साँच्चै भन्ने 12000 rubles ध्यान मुद्रकको उच्च लागत छ - यो यस्तो उपकरण लागि एकदम उच्च मूल्य हो। तर यो पहिलो नजर मा छ। हामी विस्तार प्राविधिक विनिर्देशों मा विश्लेषण भने, यो यस्तो मूल्य लागि स्पष्ट औचित्य बन्नेछ। यो मुद्रण उपकरण ठूलो मात्रा र राम्रो प्रदर्शन संग उत्पादन कागजात, उन्नत इन्टरफेस को एक सेट र सफलतापूर्वक पनि एक ठूलो कार्यसमूह भित्र प्रयोग गर्न सकिन्छ गर्न सक्नुहुन्छ।
माथिको विशेषताहरु र मुद्रण सहायक प्रणाली लागि उत्कृष्ट समाधान को कम लागत को दृश्य मा जेरक्स 3250. यसको वर्ग मा सबै भन्दा राम्रो लेजर प्रिन्टरहरू को एक छ।
सही एक लिथियम-बहुलक ब्याट्री चार्ज
सी माइक्रोफोन हेडफोन फिलिप्स SHM1900: समीक्षा
SMA-कनेक्टर: वर्णन, समारोह, उपकरण वर्गीकरण
अवलोकन Motherboard ASUS Sabertooth Z77: वर्णन, सुविधा र समीक्षा
कसरी इन्टरनेट काम? कम दर कारण
ताजा दर के छ
खाद्य पालुङ्गो स्थिर। के संयोजन गर्न र कसरी खाना पकाउनु?
5 मिनेट को लागि मध्यम कपाल नै केश
यो उपयोगी मकै porridge।
वसन्त मा मछली माछा मार्ने। निपटने, ठहराव र roaches गर्न आहारा
हर्गाडा, "रयल एरर" - होटल वा तपाईंको बिदाको आदर्श? आफैलाई निर्णय गर्नुहोस्!
Eduard Nazarov, सोभियत कार्टूनिस्ट, निर्देशक: जीवनी, रचनात्मकता
को चिहुआहुआ नस्ल: हेरविचार र मर्मतका
"क्याफिन": प्रयोग, सङ्केत गर्छ, मूल्यहरू लागि निर्देशन
घर अर्थशास्त्र को ABCs: कसरी Tissues देखि जलेको फलाम सफा गर्न
महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध समयमा काजाकिस्तान। महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध को कजाख नायक
मकर (पशु): विवरण र फोटो
भित्र मा घुटने मा के दुखाइ को मतलब हो?